“Marka Aan Si Saraaxad Leh U Hadlo, Ima Farxad Gelin, Go’aankii Ka Soo Baxay Golaha Guurtida, Oo Ku Saabsanaa Muddo Kordhintii Loo Sameeyey Madaxtooyada” | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM “Marka Aan Si Saraaxad Leh U Hadlo, Ima Farxad Gelin, Go’aankii Ka Soo Baxay Golaha Guurtida, Oo Ku Saabsanaa Muddo Kordhintii Loo Sameeyey Madaxtooyada”
March 27, 2017 - Written by Mustafe Faro
“Xiiso iima hayo, xikmadna uma arko, in aan kursiga sii fadhiyo, wakhti ka baxsan muddo xileedkii la ii doortay, isla markaana muddo kordhin marba la ii sameeyo….” Madaxweyne Siilaanyo
Madaxweyne Siilaanyo Oo Qudbad Dareen, Dardaaran Iyo Hogo-tusaalayn Isugu Jirta Jeediyey, Soona Bandhigay Hannaanka Lagaga Hortegi Karo In Muddo-kordhintii Saddexaad Loo Sameeyo
Hargeysa:(Hubaal)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, ayaa shacabka iyo beesha caalamkaba u jeediyey qudbad dhinacyo badan taabanaysa oo ku saabsan xaaladda guud ee dalka, marxaladaha lagu jiro, kuwii lasoo dhaafay iyo sida uu arko doorashooyinkii dalka ka qorshaynaa ee dib u dhacu ku yimi iyo weliba hannaanka lagaga bixi karo caqabadaas.
Madaxweyne Siilaanyo oo hadal dheer ka jeediyey munaasibad lagu daah-furayey hawlaha shidaal baadhiseed ee meelo dalka kamid ah laga wado si bisayl iyo qaan-gaadhnimo siyaasadeed ka muuqato hadalkiisa u dhigay, waxana uu soo dhaweeyey dhaliilaha mucaaridku hoggaamintiisa u jeediyaan, isaga oo dhinaca kalena muujiyey warwarka ay ku hayaan dib udhaca doorashooyinku.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay sixitaanka qaladaadka ay xukuumaddu gasho, waxana uu meesha ka saaray jiritanka cabudhin dhinaca afkaarta ah oo xukuumaddiisa lagu canaanto, “Waxaannu nahay xukuumad bisil, oo ay ku duugan tahay dulqaad, dad-wad, waayo-aragnimo iyo waayeelnimo. Sidaa darteed, waxaan soo dhoweynayaa dhaliilaha dhabta ah, ee runta ku dhisan, iyo toosinta wax lagu dhisayo ee maamulkayga loo jeedinayo. Aniga oo mabaadiida aan aaminsanahay ka duulaya, waxaan diyaar u ahay in aan saxo wixii qaladama, waxaana la yidhi “Qalad waa markii la qabto”. Dhinaca kale, waxaan ixtiraamayaa aragtiyaha ka soo horjeeda, hayaanka horumarka iyo higsiga himilada qarankan, aan hoggaankiisa hayo. Waxaannu xurmaynaynaa, xuquuda iyo xoriyaadka muwaadiniinta. Waxaan caddaynayaa in aanay jirin, isla markaana jiri doonin cid lagu cabudhiyo, ama lagu ciqaabayo fikirkiisa qof ahaaneed,” ayuu yidhi madaxweyne Siilaanyo.
Madaxweyne Axmed Siilaanyo waxa uu qudbaddiisa kusoo qaatay dib-u-dhaca ku yimi doorashooyinkii bishan aynu ku jirno dalka ka qorshaysnaa ee madaxtinimada, waxana uu caddeeyey inaanu sii jeclaysanaynin kursiga uu ku fadhiyo, balse taas beddelkeeda ay warwar aan weli dhammaan ku hayso muddo-kordhin kasta oo loo sameeyaa, waxana uu yidhi, “Sida aynu la wada soconno, dib-u-dhac ayaa ku yimi Doorasahadii Madaxtooyada ee inoo qorshaysnayd 28/03/2017, oo ay maanta inaga xigto 2 cisho. Xaqiiqdii, aad ban uga xumahay, dib-u-dhaca ku yimi doorashooyinkii Madaxtooyada, Golaha Wakiillada iyo Goleyaasha Deegaanka. Madaxweyne ahaan, ma jiro cid iga jeclayd in doorashadu qabsoonto xilligii loogu talo galay. Xiiso iima hayo, xikmadna uma arko, in aan kursiga sii fadhiyo, wakhti ka baxsan muddo xileedkii la ii doortay, isla markaana muddo kordhin marba la ii sameeyo. Mansabkan aan qaranka u hayo, waxaan ku imi si maamus leh, waxaanan jecelahay in aan kaga tago si sharaf iyo xarrago leh. Waxaan shacbigayga u caddaynayaa, in arrintani aanay ku iman xeelad siyaasadeed, oo ay xukuumadaydu ka dambaysay. Dib u dhacan, waxaa keenay, abaarta ba’an ee inagu habsatay.”
Isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu madaxweynuhu intaas ku daray, “Muddo kordhintani, waxay ka mid ahayd go’aammadii iigu adkaa, shakhsi ahaan, ee isoo maray muddadii aan talada dalka gadhwadeenka ka ahaa. Sidoo kale, waxay ka mid tahay, arrimaha culus ee aan marar badan, ka fekiray tan iyo intii aan hano-qaaday. Aniga oo arkayay duruufta adag ee dadkayga haysata, haddana si aan uga hortago dib-u-dhac ku yimaadda doorashada, waxaan isku dayey, in aan ku qanciyo madaxda xisbiyada qaranka, in la isku maareeyo gurmadka abaarta, iyo qaybinta kaadhadhka diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha, iyo qabsoomidda doorashada.”
Madaxweynuhu waxa uu sheegay inaanu marnaba ku farxin go’aankii golaha guurtidu markii labaad mudda ugu kordhisay isaga iyo ku-xigeenkiisa, balse uu ixtiraamayo, maadaama oo ay gole ahaan arrintaas awood u leeyihiin, “Marka aan si saraaxad leh u hadlo, ima farxad gelin, go’aankii ka soo baxay Golaha Guurtida, oo ku saabsanaa muddo kordhintii loo sameeyey Doorashooyinka Madaxtooyada, Golaha Wakiillada iyo Goleyaasha Deegaanka. Hase-yeeshee, waxaan garwaaqsanahay, in Golaha Guurtidu yahay hay’ad dastuuri ah, oo arrintani ka mid tahay xilka iyo waajibaadka ay qarankan u hayaan. Sidaa darteed, kasokow saluugayga aan ka muujiyey go’aankaa, haddana waxaan u arkaa, in uu yahay mid sharci ah, waan ixtiraamayaa, isla markaana waan dhaqan-gelinayaa,” ayuu yidhi madaxweyne Siilaanyo.
Mudane Axmed Siilaanyo waxa uu sheegay inuu garowshiiyo ka bixinayo saluug kasta oo dib u dhacaasi ku keenay beesha caalamka iyo saaxiibadda Somaliland, isaga oo ,mahadnaq ballaadhan u jeediyey, waxana isaga oo arrimahaas ka hadlaya uu yidhi, “Dhinaca kale, waxaan ka garaabaya niyad jabka ay ku keentay dib-u- dhicii doorashadeennu, dalalkii aynu saaxiibka ahayn, ee inaga caawin jiray geedi socodka, dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka. Waxaan jecelahay in aan madashan uga mahad-celiyo, dalalka ku bohoobay Midowga Yurub iyo Dawladda Boqortooyada Ingiriiska, taladii iyo taageeradii, ay hore uga geysteen nidaamka doorashooyinka Somaliland. Waxaynu nahay ummad gob ah, oo kala taqaan cadowgeeda iyo nasteexeeda. Sidaa darteed, waxa waajib inagu ah, inaynu u abaal hayno, cid kasta oo wax ina gashata, ama wax ina tarta. Geedi socodka dimuqraadiyadda iyo nidaamka doorashooyinka xorta ah, ma jirto cid inagu qasabtay, isla markaana inagu san-dullaysay, balse, innaga ayaa ummad ahaan dan iyo maslaxad bidnay ama u aragnay,”
Waxa uu sheegay inay doorashada soo socota xukuumaddiisu bixin doonto kharashaadka ugu badan eek u bixi doona doorashooyinka dalka kusoo foolka leh, maadaama ay deeq bixiyayaashi kaalintaas ciyaari jirey ka dideen muddo-kordhimihii badnaa ee soo noqnoqday, “Saamiga isbarbar dhigga kharashka diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha iyo doorashooyinka Madaxtooyada ee inagu soo socota, waa mid si weyn uga duwan qorshayaashii hore ama saami qaybsiyadii hore. Xukuumadaydu waxay dabooshay ama dabooli doontaa in ku dhow %90 kharashyada diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha iyo doorashada Madaxtooyada ee qabsoomi doonta November 2017. Taasi waxay daliil cad u tahay, sida aanu daacad ugu nahay, isla markaan ugu diyaar garownay, gudashada xil wadareedkaa dusha naga saaran,” ayuu yidhi Madaxweyne Siilaanyo.
Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo waxa uu shaaciyey inuu dhawaan magacaabi doono guddi mus-dambeed ah oo axsaabta qaranka iyo xubno xukuumaddiisa ahi kamid noqon doonaan, kuwaas oo diyaarin doona qorshe lagu gufaynayo dhammaanba gol daloolooyinka ku jira nidaamka doorashooyinka ee dalka iyo sidii waqtiga kooban ee la hayso wax walba loogu dhammaystiri lahaa, waxana uu yidhi, “Aniga oo ka duulaya wakhtiga yar, iyo hawsha badan ee ina hor taal, waxaan magacaabayaa, ama isu keenaya toddobaadkan guddi mustambeed ah, oo ay ku dhan yihiin saddexda xisbi qaran, xubo kooban oo ka tirsan xukuumadayda, gaar ahaan wasaaradaha qaabilsan shaqo ahaan, Guddida Doorashooyinka Qaranka, iyo goob joogayaal ama wakiillo ka soo jeeda deeq bixiyeyaahsa ama dalalka inaga taageera nidaamka doorashooyinka. Waxaan farayaa guddida cusub ee mustambeedka ah ee toddobaadkan isu iman doona in ay gufeeyaan galdalooyinka jira, isla markaana, ay ka kaalmeeyaan, guddida doorashooyinka qaranka diyaarinta qorshayaasha loo baahan yahay, (Road Map and Framework).”